Moyyaalee fi Ajjechaa Jiraattoota Ishee Mudate
Bulchiinsa naannoo Oromiyaa Godina Boranaa Magaalaa Moyyaalee bakka Shawaa Bar jedhamutti raayyaan ittisa biyyaa kaleessa Bitootessa 10 bara 2018 namoota kudhan ajjesuun kudha tokko madeessuu bulchaan magaalattii obbo Aschaalew Yohaannis ibsanii jiru. Maddeen tajaajila eegumsa fayyaa garuu namni kudha sadii madaa’uu dubbatu. Kanneen mada’an keessaa afur wal’ansa sadarkaa olaanaaf gara Hawaasaatti ergamuun ibsamee jira.
Ajjeechaa kaleessa uumamee irraa ka’uun lubbuu ofiif sodaachuun gara daangaa Keeniyaatti kan ce’an namoonni hedduun waan nyaatanii fi dhugan uummatatu haga danda’e nu kenna jechuun rakkataa akka jiran dubbatu. Irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee ta’uu ibsan. Kaleessa qofa otoo hin taane har’a iyyuu uummanni daangaa ce’uun dheessaa akka jiru ibsan.
Kanneen kaleessa ajjefaman keessaa irra jiriin Oromoo kaan gosni biraas kan keessa jiran ta’uu jiraattonni ibsanii jiru. Jiraattonni magaala Moyaalee akka jedhantti dilbata har’aa iyyuu namni lama raayyaa ittisa biyyaan baadiyyaa handaara magaalaa Moyyaaleetti ajjefamuu dubbatu.
Komaand Post kaleessa gama sabaa himaa mootummaan akka ibseetti odeeffannoo dogoggoraa irraa ka’uun namoonni 9 ajjefamanii kanneen biroo 12 madaa’uu ibsee kanneen gocha kana keessaa harka qaban ajajaa waraanaa dabalatee namni shan hidhannoo hikkachuun to’annaa jala oolu hubachiise.
Mootuummaan naannoo Oromiyaas maatii namni jalaa ajjefameef gadda itti dhaga’ame ibsuun gaaga’ama nageenyaa uummata keenya irra gahaa jiruuf furmaata waaraa fiduuf yoom iyyu caalaatti cimee kan hojjatu ta’uu